बौद्ध धर्मावलम्बीले धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाए
काठमाडौं, साउन ४ । गुरुपूर्णिमाको अवसरमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरुले धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाएका छन् । बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि भगवान बुद्धले आजकै दिन पहिलोपटक पाँचजना ब्राह्मणलाई धर्म उपदेश दिएका थिए ।
दमौली, साउन ४ । महर्षि वेदव्यासको जन्मस्थल तनहुँको दमौलीमा मंगलबार धुमधामकासाथ व्यास जयन्ती मनाइएको छ । व्यास क्षेत्र विकास कोषको आयोजना तथा जिल्ला विकास समिति, व्यास नगरपालिका, व्यास ज्योती साधक परिवार, व्यास परासर एकीकृत समन्वय समितिको आयोजनामा व्यास जयन्ती मनाइएको हो ।
‘महिला अधिकारलाई व्यावहारिकरुप दिन सबै पक्षले प्रयास गर्नुपर्छ’
काठमाडौं, साउन ४ । सभामुख ओनसरी घर्तीले संविधानबाट प्राप्त महिला अधिकारलाई व्यावहारिकरुप दिन सबै पक्षले प्रयास गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
संस्कृतिविद् जोशीलाई सत्गुरुकोरुपमा सम्मान
काठमाडौं, साउन ४ । वरिष्ठ संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई मंगलबार राजधानीमा सत्गुरुकोरुपमा सम्मान गरिएको छ । गुरुपूर्णिमाको अवसरमा नेपाल मानव धर्म सेवा समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भूमिसुधारमन्त्री रामकुमार सुब्बाले जोशीलाई दोसल्ला ओढाएर कदरपत्रसहित सम्मान गरेका हुन् ।
निजी मेडिकल कलेज सन्चालकहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर गरे डा. केसीको विरोध
काठमाडौं, साउन ४ । चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राख्दै विगत् १० दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनप्रति निजी मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेजका सन्चालकहरुले विरोध गरेका छन् । मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले डा. केसीका मागले सम्पूर्ण चिकित्सा क्षेत्रलाई नै असर गर्ने बताए ।
डा.केसीको माग अझै सम्बोधन भएन्, स्वास्थ्य अवस्था नाजुक ( भिडियो हेर्नुहोस)
काठमाडौं, साउन ४ । चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधार गर्न आठौं पटक आमरण अनशनमा बसिरहेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी अनशन बसेको दश दिन हुँदासम्म पनि उनले उठाएका माग सम्बोधनमा कुनै पहलकदमी भएको छैन् ।
पूर्वाञ्चलमा सडक सपना: योजना सफल भए कहाँ पुग्न कति दुरी ?(भिडियो हेर्नुहोस)
धनकुटा, साउन ४ । पूर्वाञ्चलका विभिन्न पहाडी जिल्लाबाट क्षेत्रिय सदरमुकाम धनकुटासम्म सोझो सडक सञ्जाल नहुंँदा सर्वसाधारणलाई समस्या भएको छ ।
आज गुरुपूर्णिमा मनाईंदै
काठमाडौं, साउन ४ । आज असार शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् गुरुपूर्णिमा । आफूलाई शिक्षा दिने गुरुप्रति सम्मान र श्रद्धाभाव प्रकट गरी गुरु पूर्णिमा मनाईंदै छ ।
त्रिशूली किनारमा ट्रक खस्यो, तीनजना गम्भीर घाइते
चितवन, साउन ४ । चितवनको कविलासमा साबुन बोकेको ट्रक त्रिशूली किनारमा खस्दा तीनजना गम्भीर घाइते भएका छन् ।
मोरङ, साउन ४ । मोरङ र झापाको सिमानास्थित मावा पुलमा ट्रकको ठक्करबाट मंगलबार बिहान प्रभातकालीन भ्रमण (मर्निङ वाक) मा हिँडेकी एक महिलाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने अर्का एकजना गम्भीर घाइते भएका छन् ।
७९ घर बगाइसक्दा पनि भोटेकोसीको त्रास कायमै
मेलम्ची, साउन ४ । गत असार २१ गते मङ्गलबार रातिदेखि आएको भोटेकोसी नदीको बाढीले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका तातोपानी, लिपिङ, बाह्रबिसेलगायतका क्षेत्रबाट हालसम्म ७९ वटा घर बगाएको छ ।